Guddoomiyaha Cusub Ee Waddani Xilkii La Wareegay. | Hargeysa World~Herald
Guddoomiyaha Cusub Ee Waddani Xilkii La Wareegay.
UncategorizedGuddoomiyaha Cusub Ee Waddani Xilkii La Wareegay.
Waxa ay ii tahay sharaf iyo guul taariikheed oo siyaasaddeed in aan ibo-furo sawir saaxadda siyaasadda Jamhuuriyadda Somaliland ku cusub oo ah: Jeexista jidka Dimuquraadiyadda ee Xisbiyadda Qaranka Somaliland ka dhisan.
Saaka waxa aan si rasmi ah Xilkii Guddoomiyaha Xisbiga WADDANI ugu wareejiyey Guddoomiyaha Cusub ee Xisbiga oo lagu doortay Shirweynihii 2aad ee dhacay 15-16 Nov 2021, anniga oo u rejaynaya Guddoomiyaha Cusub in uu Alle ku asturo Hoggaaminta Xisbiga.
Murrashaxa Madaxweynaha Xisbiga WADDANI.” Guddoomiyihii Hore ee Waddani